सपनामा शा रीरिक सम्पर्क यौ न सम्पर्क गरेको देखे के हुन्छ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/सपनामा शा रीरिक सम्पर्क यौ न सम्पर्क गरेको देखे के हुन्छ?
हरेक मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । सपनाको प्रकृति भने फरक–फरक हुन्छन् । उसो त हरेक मानिसले हर दिन फरक–फरक प्रकृतिका स’पना देख्ने गर्छन्। मान्छेले वास्तविक जीवनमा पाउन नसकेका वा दबाएर राखिएका इच्छाहरू सपनामा प्राप्त गरेको कुरा दे’ख्छन ।
यसै गरी द’बेर रहेका यौ’नइ च्छा पनि सपनामा छ ताछुल्ल हुन्छ न् । विभिन्न अध्ययन अनुसार अधिकांश युवायुवती त्यस्तो सपना देख्न चाहन्छन्, पु’रुषले पहिलो पटक म’हिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त यो कुरा धेरै म’हिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि यु’वकको अपरिचित यु’वतीसँग आँखा जुध्छ । यु’वकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो यु’वतीको सिरदेखि पु’च्छार सम्म हेर्छ ।
पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पु’रुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला मनो’विज्ञहरुका अनुसार पु’रुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ
कम्मर र हीप पु’रुषले महिलाको कम्मर र हि-पको आकारमा विशेष ध्यान दिन्छन् । छिनेको कम्मर र चौडा ही-प भएकी म’हिला पु’रुषको रोजाइमा पर्छिन् ।
आँखा वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अं’ग नै हो । आँखाको आकार, न’शालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले म’हिलाको आ’कर्षणमा प्रभाव पार्छ र पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् । एजेन्सी
वाणिज्य बैंकमा जागिर खुल्यो, सहायकदेखि वरिष्ठ प्रबन्धकसम्म ८१४ कर्मचारी माग